i-apula imemezela ngokusemthethweni ukubambezeleka kokwethulwa kochungechunge lwe-5g iphone 12
none Izindaba Nokubuyekezwa I-Apple imemezela ngokusemthethweni ukubambezeleka kokwethulwa kochungechunge lwe-5G iPhone 12
I-Apple imemezela ngokusemthethweni ukubambezeleka kokwethulwa kochungechunge lwe-5G iPhone 12
Ngemuva ukubika ikota lesithathu lezimali elisetha amarekhodi eqeda okulindelwe yiWall Street & apos, u-Apple ubenezindaba ezimbi okufanele azimemezele. Ngesikhathi kukhalwa engqungqutheleni elandela umbiko weholo, Isikhulu Esiphezulu Sezimali senkampani uLuca Maestri wathi, 'Njengoba wazi, ngonyaka odlule siqale ukuthengisa ama-iPhones ngasekupheleni kukaSepthemba. Kulo nyaka, silindele ukuthi izimpahla zitholakale emasontweni ambalwa kamuva. '
Umugqa we-Apple & apos; s iPhone 12 uzoqala ngo-Okthoba noma ngoNovemba
Ukuphawula kusho ukuthi siyibonile i-5G 2020 I-iPhone 12 amamodeli akhishwe ngo-Okthoba noma ngisho ngasekupheleni kukaNovemba. Lokhu akusilo uhlamvu lwe-Apple oluvame ukugcina wonke umuntu eqagela ngokuthi luzoqala nini ukuthumela amamodeli alo we-iPhone akamuva aze avezwe. Kepha izolo, lapho ebika imali ayitholile ngekota yesithathu, umklami we-chip uQualcomm uthe ukuthunyelwa kwehendisethi kwe5G kuzokwehla ngo-15% kwikota yamanje ngoba ikhasimende elingagagulwanga igama lalihlela ukubambezela 'ukwethulwa kwezingcingo zomhlaba wonke ze-5G. Akuzange kuthathe umsebenzi omningi wabaseshi ukuthola ukuthi ikhasimende elingagagulwanga igama liyi-Apple.
Selokhu i-coronavirus iqale ukuzungeza umhlaba ekuqaleni konyaka, kube nenkulumo yokuthi i-apula kungadingeka ukuthi ibambezele ukwethulwa kochungechunge lwe-iPhone 12. Ukuthengwa kwenkampani kwakusebenza ngaphansi kwesivinini esigcwele, futhi imigqa yokuhlangana ezikhungweni eziqhutshwa nguFoxconn, umlingani wayo ophambili wokukhiqiza, yayinamandla angama-50% ngoba izimpahla zazimbalwa. Ngenkathi ikota yokuqala yekhalenda isizophela, i-Apple yakwazi ukuvula zonke izitolo zayo eChina njengoba zaqala ukuvalwa e-U.S. UFoxconn ushaye imigomo yokuqashwa kwabasebenzi ngaphambi kwesikhathi .
Ukwethulwa kochungechunge lwe-5G Apple iPhone 12 kuzoba sekwephuze amasonto ambalwa
Esikhathini esedlule, i-Apple bekufanele ikhiphe izinhlobo ezithile ze-iPhone ngemuva kukaSepthemba. Ngo-2017, i-iPhone X ayizange yethulwe kuze kube nguNovemba 3 ngalowo nyaka. Ngonyaka olandelayo, i-iPhone XR yayingakhishwa kuze kube ngu-Okthoba 26, futhi ngonyaka odlule kwaba okokuqala ngqa kusukela ngo-2016 ukuthi zonke izinhlobo ze-iPhone zakhishwa ngoSepthemba.
Kufanele sibone ama-iPhones amane amasha akhishwe kulo nyaka kufaka phakathi i-5.4-inch iPhone 12, i-6.1-inch iPhone 12 Max, i-6.1-inch iPhone 12 Pro, ne-6.7-intshi iPhone 12 Pro Max. Zonke izinhlobo zizonikwa amandla yi-5nm A14 Bionic chipset. Amayunithi we-'Pro 'azofaka i-6GB yememori nezinketho zokugcina zizoqala ku-128GB. Izinhlobonhlobo ze-premium zizofika namakhamera weWide, Ultra-wide, neTelephoto kanye ne-LiDAR sensor sensor. Okokuqala ukubonwa ku-2020 iPad Pro, inzwa yendiza izonikeza izinzwa zokujula ezinembe kakhulu zemifanekiso ethuthukisiwe namakhono we-AR athuthukisiwe. Sibonile amamodeli we-'Pro 'entshontsha esinye isici kusuka ku-iPad Pro ngezinga le-120Hz ProMotion Refresh. Lokhu kunikeza abasebenzisi ukuskrola okushelelezi nokugqwayiza okuthuthukisiwe kwemidlalo yevidiyo. Ku-120Hz, isibonisi sibuyekeza izikhathi eziyi-120 ngomzuzwana. Kodwa-ke, kube nokuqagela kokuthi i-iPhone 12 Pro ne-iPhone 12 Pro Max zizosifaka yini lesi sici.
Uchungechunge lwe-2020 iPhone 12 luzoba nomklamo ohlukile. I-Apple isusa izinhlangothi eziyindilinga ezibonwe kudivayisi kusukela kulayini ka-2014 & apos; s iPhone 6 ezinhlangothini eziyizicaba i-Apple eyazisebenzisa kuqala nge-iPhone 4 ngo-2010. Ingabe inhliziyo yakho isethwe kolunye lwezinhlobo zochungechunge lwe-5G iPhone 12? Kungadingeka ubambe amasonto ambalwa ngaphambi kokuyithenga. Futhi lapho wenza uvula ibhokisi, ungaqaphela ukuthi i-Apple inqume ukungafaki isitini sokushaja nefoni. Ngenkathi ama-iPhones we-2020 ezokweseka ukushaja okusheshayo kwe-20W, labo abafuna ukusizakala ngejubane lokushaja elisheshayo bazodinga ukuthenga ishaja engu-20W ngokuhlukile. Ngaphezu kwalokho, i-Apple futhi kulindeleke ukuthi ishiye ama-earphone anentambo ngaphandle kwamabhokisi ochungechunge lwe-iPhone 12 ngomzamo wokushayela ukufunwa kwama-Bluetooth AirPods ayo angenantambo.
i-lg ifoni enhle
i-fortnite ibuyela ku-apula
iziqalisi ezihamba phambili ze-galaxy s6
Kungani kufanele ucabange kabusha ukuthenga i-iPhone 12
Amakhasimende we-T-Mobile manje angazuza ikhadi lesipho le- $ 5,000 le-Amazon
IMicrosoft Lumia 640 izoba ngomunye wabokuqala ukuthola Windows 10 buyekeza
Ukubuyekezwa kwe-LG V10
Ama-Smartphone ashaja ngokushesha: ashesha kakhulu ukushaja kusuka ku-0% kuya ku-100%, kusuka ku-Galaxy kuya ku-iPhone
Ungayisebenzisa kanjani i-Samsung & apos; s Smart switch ukuthuthela kwi-Galaxy smartphone kusuka ku-Android noma i-iOS
Ungayibuka kanjani bukhoma i-Super Bowl LII 2018 ku-Android yakho, i-iPhone noma i-iPad
Amadili amasha ashisayo aphonsela i-Samsung & apos; s i-Galaxy Note 10 ne-Note 10+ endaweni yokuxoxisana
I-Apple ilawule usesho lwe-App Store ukuvumela izinhlelo zayo zokusebenza kulo mncintiswano
Izintengo ze-Samsung Galaxy S6 ukuqala ngo- € 699 eYurophu, umkhawulo we-S6 128 GB ungabiza u- € 1,049